Umbhede uye wayeka ukuphela kwendawo yokulala ngesondo. Imeko inokuhluke kakhulu: ukugqithiswa okungalindelekanga kwesifiso sesondo kunokukwenza ukuba ulale ngesondo apho ukhona, okanye mhlawumbi ungumtshatsheli weendawo eziphambili kwaye unqume ngamabomu ukushiya umbhede oqhelekileyo, ukutshintshana ukuze ube yindawo engabonakaliyo kodwa yangaphambili. Unokufumana isiqendu seendawo, zombini ngaphakathi nangaphandle kwendlu. Into ephambili kukuba uqinisekise ukuba isondo esinjalo siya kukhuseleka kwaye sikulungele, ngaphandle koko uya kudana.
Oku mhlawumbi kuninzi kuzo zonke iintlobo zesini kwiindawo "ezingaqhelekanga". Ngokwemvelo, kungcono kunabo bonke ukuba kukho ubuncinane i-carpet kumgangatho. Kodwa nangona ingubo leyo ayikwazi ukukukhusela kubunzima bomgangatho. Ngexesha lokwabelana ngesondo, iqabane liyakunxininisa ngokunyanisekileyo emgangathweni, kwaye emva koko izivalo ziya kuba kwi-teleost yakho. Ngoko ke mhlawumbi siza kulawulwa ngandlela-thile ukuze singakhange sifundwe, okanye siqale ukuphosa umatila phantsi.
Isondo kwi tafile
Sisoloko sibona kwiifilimu indlela izinto ezingcolileyo zomhlaba zichithwa ngempumelelo, kwaye indoda ikhupha iqabane lakhe kwitafile. Mhlawumbi kwiskrini libukeka lipholile, kodwa ebomini, njengomthetho, konke kunzima kakhulu.
Ukuba sithetha ngesini e-ofisini, kuya kufuneka ukuba uqokelele izinto ezahlukeneyo zeofisi, uchwephesha unokubandezeleka ngenxa yokuwa: ikhomputha, umnxeba, njl. Kwaye kwindleko yeso nkonzo "perepihona" iya kuba yilwayo ebonakalayo yomonakalo kwipropati. Ekhaya, itheyibhile yokuthuthuzela ingaba itafile ekhitshini, ephethe ezinye iingozi. Iifolo kunye nemimese zingakuqinisekisa, kwaye izitya eziphukileyo akunakwenzeka ukukuvuyisa.
Ngokuqhelekileyo, ingcamango yento yokuba yonke inkqubo iya kwenzeka kwindawo enjalo engacwangciswanga, inika ubukhali kwiintliziyo, kodwa masibe sisincinci kwaye silungiselele kwangaphambili. Ukulandelela ubuncinci ukuqinisekisa ukuba izinto eziza kupheka kwitafile, musa ukudiliza kwaye musa ukukulimaza.
Ubundlobongela kwindawo yokuhlamba nayo ithatha iingcambu zayo kwiinkampani zefilimu. Kwamagumbi ethu akukho ndawo eninzi kwesi sifundo. Ngoko ke, amaninzi iqabane liboniswa kumatshini wokuhlamba okanye ugugu phezu kwendlu yokuhlambela. Ngokuqhelekileyo, ubuchule obunjalo bubonakalisa kulawo matyala xa ezinye iindawo ezikulo ndawo zingekho kule mzuzu. Yinto enye into - ngesondo kwisitya. Ekuseni okanye kusihlwa, uhlala enika i-vivacity kunye namandla. Kodwa kwiindawo zokuhlambela zasekhaya ungahlala ukhululekile kunye ne-netas nje, kwaye izindlu zokuhlamba eziqhelekileyo azikholisi ngobukhulu bakho, ngoko kuya kufuneka wenze indawo.
Isondo kwindlu yangasese
Ekhaya, leli gumbi linyulwa kuphela. Ngokwemveli, izindlu zangasese zisetyenziselwa ukulala ngokwesibini kwizibini kwiiklabhu okanye kwi-korporativah. Iindawo apha akwanele, akukho ndawo yokuhlala kuyo, kodwa ifumanisa ukuba kukho nawuphi na umzuzu abantu bangabonakala kwiidokodo ezakhelene nazo. Kodwa yintoni eza ku funeka ilibaleke ke le yinto yokuqala yokucoceka nococeko.
Ukwabelana ngesondo kwindawo kawonkewonke
Ingaba isiteyithi okanye ukungena - inkokheli yesondo "ye-aerodrome" yabaselula, igumbi lesitolo kwintengiso, ibhentshi yepaki, i-salon yemoto ... Ngamanye amazwi, le yindawo apho ngaphandle bangakwazi "ukukubamba". Enyanisweni, abanye abalandeli abagqithisileyo bafana kwaye bavuya, ukunyamezela kukuba kufuneka ulale ngesondo, usengozini yokuphawula. Kwimeko apho ukubonakala kwababukeli kubonakala kuncinci (umzekelo, zonke izinto zenzeka ngo-2 ekuseni), kusekho umngcipheko wokuba umntu akubonise. Ngoko ukuba iqabane liyakudonsela ebhentshini, lithembele kwisini, yenza isigqibo ngokukhawuleza ukuba unesibindi esaneleyo okanye uya kukhwankqiswa yi-eachhoroshoh nganye. Kukulungele ukulala ngesondo, kunjalo, akufanele uthethe, kodwa ukunyuka kwe-adrenaline, njengomthetho, kuhlanganisa zonke iimbono.
Ungasebenzisa ulwandle ukuba ulale ngesondo, ungakwenza kwimithi okanye kwikona ecocekileyo yepaki. Umngcipheko wokuba uxhumano lwakho luya kwenziwa "loluntu", ngendlela, lusezantsi kwimeko kwimeko yangaphambili. Kodwa oku kuphela kwiincwadi "uthando ehlathini" lubheka uthando. Ubomi bobubomi, oku kungabi lula. Emva kokulala emhlabathini, unokubamba ngokukhawuleza kubanda, kwaye oku akuthethi ngamakethi, ukubetha kwezinambuzane kunye nezinye iingxaki. Ukongezelela, ubulili kwimvelo buyakwenzeka ngexesha elifudumeleyo.
Ngombulelo kwi-cinema yanamhlanje, abaninzi baninzi bafuna ukuzama ukulala ngesini xa behlamba. Kule meko, kufuneka unqumle ukhetho lwakho kumanzi angenanto, apho ubunzulu buya kuba buncinane kwisifuba, kuba njengepikerorganizma unako, udibe ngaphantsi kwamanzi, unxweme.
Ngokwemvelo, ngaphambi kokuba uqale isenzo sothando kwimvelo, qiniseka ukuba akukho mntu ujikelezile. Ewe, ukuba awunabo bobuboniso. Ukubaluleka okubalulekileyo kukuba isondo kwiindawo ezingaqhelekanga zidla ngokukhawuleza, abantu bayakhohlwa ukuba kukho izilumkiso. Ngoko ke, ukuba unokusola ukuba isiphelo siya kugqiba ngesondo, qiniseka ukuba uthathe ikhondom okanye enye imithi yokukhusela. Ukuba ungenanto nanye nawe, kunengqiqo ukuyeka isondo, ubuncinci, ukukhawuleza ukuba udibanise.
Ngaba kufuneka ndivumelane ngesondo elibi kakhulu, ukuba iqabane liyanxininisa kule nto, kwaye wena, ngokunyanisekileyo, awunakulungelekanga? Ewe, awukwazi ukuhlala ehlathini okanye phantsi! Ngokuqinisekileyo, kukwakho ukugqiba. Ngenye indlela, nikela isilwanyana sakho ukuba senze inxaxheba kwi-petting, kunye "nomboniso ophambili" ukufudukela kwindawo efanelekileyo ngakumbi okanye uzame ukwenza indawo yindawo ephephile kwaye ikhululekile.
Ukukhula ngokwesondo kwiintsholongwane
Ubomi emva kwesondo
Amathoyizi e-Sex - ingozi kwimpilo okanye inzuzo?
Uncedo lokuqala kwiimeko ezinomdla ngexesha lesini
Kuthetha ukuthini ngokufanelekileyo ukutya?
I-Psychology yowesifazane ophumelelayo
AmaMediki malunga nokulala ngexesha lokukhulelwa
Ubomi buntu bubaluleke kakhulu
Ngubani ongasebenza kumfazi kumazwe aseYurophu?
Umfana onomona kwiintombi yakhe ...